Mareykanka iyo xulufadiisa oo ka mideysan sidii hore
Haddii mid ka mid ah ahdaafti uu Vladimir Putin uu ka lahaa dagaalka uu isaga doortay ee Ukraine uu ahaa inuu kala qeybiyo NATO iyo Xulafada Galbeedka, si qoto-dheer ayuu u niyad jabay taasina waxaa laga arki karaa socdaalki uu dhawaan madaxweyne Joe Biden ku tagay Yurub.
“NATO wiligeed uma midoobin, sida ay maanta u mideysantahay oo kale,” ayuu yiri Madaxweyne Biden kaddib marki uu Xulafada kula kulmay Brussels si uu ugala hadlo dagaalka aanan cudur-daarka laheyn ee gardarrada ah ee Ruushka.
Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen, kaddib kulanka, ayay madaxda Dowladaha xubnaha ka ah NATO ku celiyeen cambaareyntooda ku aaddan duullaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine. Waxay sheegeen in dagaalkani uu khatar ku yahay ammaanka iyo nidaamka caalamka.
Hogaamiyaasha ayaa ugu baaqay Kremlin-ka in ay si dag dag ah u sameeyaan xabbad-joojin isla markaana ay wadahadallo dhab ah la galaan Ukraine. Waxay carrabka ku dhajiyeen taageerada ay u hayaan madaxbannaanida iyo sharafta dhuleed ee Ukraine.
Hogaamiyaasha dalalka isbaheysiga waxay ballan qaadeen in aysan uga kici doonin cadaadiska abaabulan ee caalamiga ah ee ay saareen Ruushka. Waxay kaloo shaaca ka qaadeen in ay sii adkeyn doonaan ballan-qaadkooda fulinta qodobka 5 ee heshiiskii Washington.
Waxay sheegeen in ay meeleyn doonaan ilaa 40,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka NATO kuwaas oo la geyn doono dhinaca bari ee Yurub, iyo sidoo kale afar cutub oo ciidamo caalami oo dheeraad ah oo la dhigi doono dalalka Bulgaria, Hungary, Romania, iyo Slovakia si ay u xoojiyaan ciidanka jiidda hore ee dhinaca bari.
“Waxaanu qaadeynaa tallaabo walba iyo go’aan walba si aan u xaqiijinno amniga iyo difaaca dhammaan Xulafada dhinac walba,” ayay ku yiraahdeen bayaankooda.
Madaxweyne Biden ayaa yir “Putin wuxuu helayaa dhab ahaantii lidka wixi uu damacsanaa inuu helo, taasoo ah cirib-xumada aaditaankiisa Ukraine,”
Midnimo iyo isku duubni taas la mid ah ayaa iyaduna soo muuqatay, marki uu Madaxweyne Biden la kulmay hogaamiyaasha dalalka la isku yiraahdo G7 iyo Golaha Yurub. G7 ayaa si buuxda u dhaqangeliyay cuna-qabateyn adag oo ay kusoo rogeen Ruushka.
Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen ayay ku ballan-qaadeen: “Si loo dabbaqo tallaabooyin dheeraad ah oo ah sida la rabay, waa inaan si joogta ah u falcelinnaa si wada jir ah sida aan hadda sameyneyno.” Waxay kaloo isku raaceen in ay sare u qaadaan gargaarka bani’aadannimo ee Ukraine iyo dalalka deriska la ah.
Kaddib marki uu lasoo hadlay hogaamiyaasha Midowga Yurub, ayay Madaxweyne Biden iyo Madaxweynaha Guddiga Yurub Ursula von der Leyden ku dhawaaqeen hindise cusub si loo yareeyo ku tiirsanaanta gaaska Ruushka isla markaana sare loogu qaado helitaanka adeegsiga tammarta laga dhaliyo biyaha iyo dabeylaha.
Magaalada Warsaw, Madaxweyne Biden ayaa soo koobay cawaaqibka uusan marnaba ku tala galin inuu Putin la kulmayo marki uu ku duulayay Ukraine: “Dimoqraadiyadda duninda waxaa dib u soo nooleeyay hadaf iyo midnimo lagu helay bilo taasoo beri qaada jirtay in lagu helo sannado… Waa in aan hadda ballan qaadno in aan dagaalkan ku jirno muddada dheer. Waa inaan midownaa maanta iyo berri iyo maalinta xigta iyo sannadaha iyo tobannaanka sano ee soo socda.”